EPRP ထင်မြင်ယူဆချက် Archives - EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
You are at:Home»Category: "EPRP ထင်မြင်ယူဆချက်"
Browsing: EPRP ထင်မြင်ယူဆချက်
ပြည်နယ်များအနေဖြင့် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစတင်ရေးဆွဲသင့်ကြောင်းကို ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံတွင် အားလုံးနီးပါးသဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိသင့် ဟူသောအခြေခံတောင်းဆိုချက်သည် အဟန့်အတားဖြစ်နေသည်။ အဆုံးတွင် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဖွဲ့စည်းပုံသည်ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်လိုက်လျောညီထွေရမည်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမူ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတခုမဟုတ်ပေ။ သို့ဆိုလျှင် ဖက်ဒရယ်စနစ်လမ်းကြောင်းသို့ချီတက်နိူင်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား မည်သို့ဖော်ဆောင်နိူင်ပါသနည်း။ ၁။ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးအတွက် လူထုကိုတွန်းအားပေးရမည်။ ၂။ ပေါ်ပေါက်လာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်များနှင့်အညီ ပြည်နယ်တိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပခြင်းသည် နောက်တဆင့်ဖြစ်လာမည်။ သို့မှသာပြည်နယ် အစိုးရသစ်များ ဖွဲ့စည်းနိူင်မည်ဖြစ်သည်။ ၃။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိူင်ရန်အတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲက အရေးသိပ်မပါသော ပြဌာန်းချက်အချို့ကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားရှိခြင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ပြည်နယ်အစိုးရသစ်များဖွဲ့စည်းပြီးသောအခါ ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေအားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြည်မနှင့်ဖက်ဒရယ်အစိုးရများအကြား အာဏာခွဲဝေရေးအတွက် ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ( နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ)တရပ် အမြန်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ အဆိုပါအဆင့်အတွက် အချိန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကြားဖြတ်အစီအမံများ(NCA ထဲတွင်ဖြည့်စွက်ချက်အဖြစ်ထည့်ရန်)အတွက် လုံလောက်သောရန်ပုံငွေရရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကြားဖြတ်အစီအမံများဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအားအကျိုးအမြတ်အများဆုံး ရရှိစေရန် အစိုးရနှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ရမည့်ကြားဖြတ် ကာလတခုအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေး ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်များ ၊ လုံခြုံရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖော်ဆောင်ရေးတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေထဲရှိ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားရှိရန်လိုအပ်သောပြဌာန်းချက်များမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ၏သက်တမ်းသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏သက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်သည် ဟူသော ပုဒ်မ ၁၆၈ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များခန့်အပ်တာန်ပေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ပုဒ်မ ၂၆၁ နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ၏ရာထူးသက်တမ်းသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ရာထူးသက်တမ်း အတိုင်းဖြစ်သည် ဟူသော ပုဒ်မ ၂၆၂ တို့ဖြစ်သည်။ .
မကြာသေးမီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတွင် အနာဂါတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိူင်ငံသည် ပြည်နယ်များအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများရေးဆွဲခွင့် ပြု / မပြု ၊တာဝန်ခံခွင့် ပေး / မပေး ဆိုသည့် အပြုသဘောဆောင်သော သဘောတူညီမှုဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါအလွန်အကျိုးရှိမည့်တိုးတက်မှုမှာ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှ သွေဖီခြင်းမရှိစေရ ဟူသည့် တပ်မတော်၏တောင်းဆိုချက်ကြောင့် သောင်တင်ရေမကျဖြစ်နေရသည်။ အရေးကြီးသော ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတရပ်လည်းရှိနေပါသည်။ ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်၍မရချေ။ သို့ရာတွင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိသေးပါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပြည်ထောင်စုစနစ်သာဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အသွင်သဏ္ဍန် မဟုတ်ပေ။ လက်ရှိနှိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည် ဖက်ဒရယ်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်ဆိုပါက ပြည်နယ်များအား ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးဆွဲခွင့်ပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ မည်သို့မည်ပုံရေးဆွဲမည်ဆိုသည်ကို အလေးထားဆွေးနွေး နိူင်မည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါအ၀င် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့၏လိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင်ရေးဆွဲနိူင်မည်ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သော ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံတွင် တပ်မတော်က ပြည်နယ်များပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ခြင်းမပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့တောင်းဆိုထားသော ခွဲထွက်ခွင့် ဟူသောစကားရပ်အား တုန့်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအဆင့်အနေအထားတွင် ခွဲထွက် ခွင့် ဟူသောစကားရပ်အားဖော်ပြခြင်းမပြုလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိူင်ပါသည်။ ယခုမြန်မာနိူင်ငံသစ်သည် အစမ်းသဘောသာရှိသေးသည်ကိုအားလုံးသိထားပြီးဖြစ်သဖြင့် ခွဲထွက်ခွင့် သည် ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲတွင် ပါရှိထားသည်ဟုနှလုံးသွင်းထားနိူင်ပါက အားလုံး အတွက် အဆင်ပြေနိူင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုနှင့်ပူးပေါင်းနေထိုင်ပါမည်ဟု သဘောတူညီထားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအတွင်း ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပြုမူဆက်ဆံကြမည်ကို သေချာရေရာစွာမသိရှိရသည့်အတွက် ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုသည့်စကားရပ်သည် ၎င်းတို့ကိုစိတ်သက်သာရာ ရစေသည်ကို နားလည်သဘောပေါက်မိပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာပြီးနောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများသည်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် ယခု အချိန်အထိ ၎င်းတို့ပြုမူဆက်ဆံခံနေရခြင်းကို ကျေနပ်မှုမရှိကြပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ စိတ်သက်သာမှုမပေး နိူင်ပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ခွဲထွက်ခွင့်ဟူသောစကားရပ်မပါဝင်သည့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမရှိသော တပြည်ထောင် စနစ်တောင်းဆိုချက်အား တိုင်းရင်းသားအချို့လက်ခံလိုစိတ်မရှိကြခြင်းမှာ သိပ်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တွင် ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဍန်များပါရှိရေးမှာ တပ်မတော်နှင့် အစိုးရ၏သဘောပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ ခွဲထွက်ခြင်းဆိုသည့်စကားရပ်သည် ပယ်ပျောက်သွားပါ လိမ့်မည်။
EPRP သည် ဒေသခံလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် အသိပညာ ပေးရေး စီမံကိန်းနှစ်ခုကို မြို့နယ်များ၊ကျေးရွာများထိရောက်ရှိပြန့်နှံ့အောင် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် မြေယာဗဟုသုတမျှဝေရေးဖိုရမ်များ ၂၀၁၆ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဒေသအသီးသီးမှ ကျေးရွာနေလူထုများအား မြေယာဥပဒေ၏အရေးပါပုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနိူင်ခဲ့ပါသည်။ယခု အတွေးအမြင်စာစု သည် မြေယာဥပဒေများသည် ၎င်းတို့၏ ဒေသအခြေအနေ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အံခွင်ဝင်ကျရှိစေရန် မည်မျှအရေးကြီးပုံကို ဆွေးနွေးတင်ပြ ထားပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ် မြေယာပြဿနာများအား လေ့လာတင်ပြချက်
ဒီဇငျဘာ 10, 2016 EPRP
ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြေယာပြဿနာများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်သည် အစိုးရသစ်အတွက် အကြီးမားဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ရှိနေပါသည်။ မဖြစ်မနေ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် တာဝန်လည်းရှိသကဲ့သို့ ထိုပြဿနာများအား လက်တွေ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းက အစိုးရသစ် အတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ယခု “ဇွဲကပင်သက်သေ ဒို့ယာမြေ” အစီရင်ခံစာမှာ အစိုးရသစ်၏ မြေယာပြဿနာဖြေရှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ကရင်ပြည်နယ်မှအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တတပ်တအား အားထုတ်ဝန်းရံမှုတခုဖြစ်ပါသည်။ “ဇွဲကပင်သက်သေ ဒို့ယာမြေ” (pdf, 3.1 MB) The Executive Summary in English is available here.
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ ။ ။ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၏ ပြည်နယ်များအကြောင်းအရာ(အဆက်)
စကျတငျဘာ 15, 2016 EPRP
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွင် ဒေသဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထည့်သွင်းနိူင်ရန်မည့် ပြည်နယ်အခြေပြုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများထူထောင်ရန် အလျင်အမြန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံနှင့်ပတ်သက်၍ EPRP အတွေးအမြင် အပိုင်း ၃ ကို ဤနေရာ တွင်ကြည့်ရှုနိူင် ပါသည်။
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ ။ ။ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၏ ပြည်နယ်များအကြောင်းအရာ
စကျတငျဘာ 1, 2016 EPRP
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွင် ဒေသဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထည့်သွင်းနိူင်ရန်မည့် ပြည်နယ်အခြေပြုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများထူထောင်ရန် အလျင်အမြန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။အပြည့်အစုံသို့
၂၁ ရာစုပင်လုံနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
ဩဂုတျ 23, 2016 EPRP
မြန်မာနိုင်ငံတော်၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဇူလိုင်လအတွင်းကတွေ့ဆုံစဉ်က “ တောင်းဆိုချက်များအစား ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မိမိတို့ဘာပေးဆပ်နိူင်မည်ကိုစဉ်းစားပါ “ ဟူ၍မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုစာတမ်းသည် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များ၏ရှုမြင်မှုမှ နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိစ္စပုံဖော်ဆောင်ရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ အပြုသဘောဆောင်သောအကြံပြု ချက်များ ပေးခြင်းဖြင့် သေးငယ်သော်လည်းအရေးကြီးထင်ရှားသောတုန့်ပြန်မှုတရပ်ကို ဆွဲထုတ်ပြသရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
သမ္မတက ၀န်ကြီးချုပ်များခန့်အပ်။ ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုခေါင်း ဆောင်များအတွက် အပြောင်းအလဲမဟုတ်
မတျ 31, 2016 EPRP
အတွေးအမြင် Alan Smith နှင့် Gregory Cathcart (EPRP)တို့ရေးသားသော စာတမ်းဖြစ်သည်။ တက်ရောက်လာသော အန်အယ်ဒီအစိုးရ၏ ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးများ ရွေးချယ်တင်သွင်း မှုသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ အန်အယ်ဒီအနေဖြင့် ထိုကျင့်ထုံးကိုကျင့်သုံးလိုက်သောကြောင့် ပုံမှန်ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုနှင့် ညီညွှတ်မှုရှိသော အစစ်အမှန်ကျင့်သုံးမှုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် ယခုအခြေခံဥပဒေဆိုင် ရာပြဌာန်းချက်ကို ပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
ဇနျနဝါရီ 20, 2016 EPRP
မကြာသေးမီက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ EPRP ၏ထင်မြင်ချက်